OsoteMapi | Omume Kasị Mma nke Ndị Ọrụ Remote
Ihe Nchoputa ohuru nke ndi oru choro iji meputa uzo - $ 79 Zụta ugbu a
Omume Kasị Mma nke Ndị Ọrụ Remote
Anyị emeela ọtụtụ nyocha nke ndị ọrụ dịpụrụ adịpụ ma chịkọta omume kacha mma nke ndị ọrụ dịpụrụ adịpụ.
N'ọtụtụ ụzọ enwere nkwekọrịta zuru oke na mgbe 2020 gafere, a ga-enwe echiche nke ịlaghachi 'nkịtị'. Ihe ọ bụla nkịtị bụ site ụkpụrụ nke taa o doro anya na enwere ọhụụ ọhụụ apụtala.
Anyị nyochara ihe karịrị 1000 ndị na-arụ ọrụ n’ime ime obodo ma jụọ, sị: “wantnu chọrọ ịlaghachi n’ebe ọrụ anyị oge nile mgbe ọrịa a na-achịkwa na-achịkwa ya?”
Ihe karịrị 90% nke ndị zaghachiri kwuru na ha achọghị ịlaghachi na ebe ọrụ Covid mbụ.
Nzaghachi nyocha a abughi ihe ijuanya nye anyi NextMapping - Anyị elebara anya na mmekọrịta mmadụ na ibe ya yana ndị ọrụ ọrụ na-emetụta ọdịnihu ọrụ maka afọ iri gara aga.
Mgbe anyị na ndị isi kerịta ọnụ ọgụgụ ahụ dị n'elu, ha na-akwado na nyocha nke onwe ha nke ndị ọrụ ha na-egosi nzaghachi yiri nke a. Ọ bụrụ na ndị ọrụ chọrọ ịga n'ihu na-arụ ọrụ nke ọma, ọ pụtara na ọtụtụ ụlọ ọrụ kwesịrị ileghachi anya na sistemụ na akụrụngwa ha iji kwado ebe ọrụ ọrụ dịpụrụ adịpụ nke ọdịnihu.
Fọdụ ndị isi ụlọ ọrụ na-alụ ọgụ maka ọchịchọ ndị ọrụ ka ha rụọ ọrụ na-enye iwu ka ha 'laghachi n'ọfịs'. Approachzọ a agaghị arụ ọrụ nke ọma n'ikpeazụ. Emeela ka genie si na karama ahụ pụta ma ndị ọrụ enweela ike igosipụta n'oge Covid na ịrụ ọrụ n'ụlọ nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma.
Nnyocha anyị mere na-egosi na ịlaghachi ọrụ maka ọtụtụ ụlọ ọrụ ga-agụnye iwu gbasara ọrụ dịpụrụ adịpụ. Na mgbakwunye enwere ụdị ngwakọ nke ọrụ dịpụrụ adịpụ na ọrụ ọfịs.
Remote ọrụ dị nnọọ irè n'ihi na ọtụtụ ndị ọrụ anyị ahụwokwa na e nwere ụkpụrụ ndị a na-ahụkarị n’etiti ndị ọrụ dịpụrụ adịpụ nke ọma.
Omume kachasị mma nke ndị ọrụ dịpụrụ adịpụ gụnyere:
O doro anya na esetịpụ atụmanya n'etiti onye ndu na onye ọrụ gburugburu ihe mgbapụta - ọrụ a ga-arụ, ntuziaka gburugburu oge iji nweta ya na otu esi arụ ọrụ.
Nkwurịta okwu na-agbanwe agbanwe mgbe niile site na ụzọ nkwukọrịta niile - ndị ọrụ na-aga nke ọma na-eme mkparịta ụka site na ndị otu MS ma ọ bụ ọnụ ụzọ ha n'ịntanetị, site na IM ka ndị otu otu kesaa ihe nwere mmasị na otu ahụ, iji ozi ịntanetị nke ọma ma mara mgbe ị ga - ewere Ekwentị ma ọ bụ ịrịọ maka mmezi mebere.
Lekwasị anya na oke ọrụ iji zere ike ọgwụgwụ - ndị ọrụ na-aga nke ọma na-amata uru ọpụpụ ịhapụ ọrụ iji tọgharịa ma kwụghachi ya
Ikike nke iji aka ya eme ihe site na mgbatị ahụ, ịga ije, ige egwu, ịtụgharị uche na ịrịọ maka nkwado ma ọ bụ enyemaka.
Mgbe ị na-arụ ọrụ otu ọrụ na-eji usoro njikwa ọrụ iji jide n'aka na onye ọ bụla na-ejikọ ma na-ekerịta ozi ahụ n'ihu ọha gụnyere usoro iheomume na ihe nnweta.
Ndị isi na-aga nke ọma na-eche echiche banyere izu nyocha kwa izu na nke ọ bụla n'ime ndị otu ha kpọmkwem ịjụ 'kedu ka ị mere?' ma nye nkwado na nkuzi.
Na-eme atụmatụ maka na-ebute ụzọ tupu izu ọ bụla - na-elekwasị anya n'ihe atọ kachasị mkpa n'ụbọchị - ịtọlite ​​ebumnuche ndị a ga-erubere maka ịnapụta.
Hazi oge oghere n'etiti nzukọ dị iche iche - ịtọlite ​​ihe nchekwa nke 15 ruo 30 nkeji n'etiti nzukọ na-enye ohere maka mgbatị, ịgagharị na iji nweta ume si na ihu.
Na-akọwapụta kwa ụbọchị site na ịlele ngwa ngwa nke ihe emezuru, ihe gara nke ọma na ihe ha ga-eme nke ọma n'echi ya (lekwasịrị anya na-aga n'ihu).
Anyị enweghị ike ileda 'uche onye ọrụ' anya yana otu o si emetụta ọdịnihu ebe ọrụ. Anyi no na 'ahia ndi oru' nke putara na ndi oru di njikere icho oru ebe ozo ma oburu na onye were ha n'ọrụ enweghi ike inye ha oru ebe di anya.
Ọ bụrụ na anyị elekwasị anya na omume kacha mma nke onye ọrụ dịpụrụ adịpụ, anyị nwere ike ịkwalite ịdị irè nke otu esi arụ ọrụ dịpụrụ adịpụ.